အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များထိရောက်မှုမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဘောလုံးခန့်မှန်း site ကို
+7/ 9584-983-763အချက်အလက်@s ကိုoက ccerဖြစ်tshoot.com
1.အကောင်းဆုံးဘောလုံးခန့်မှန်း site ကိုများအတွက်န်ဆောင်မှုများ scope
လုပ်ခအဘို့အ SoccerBetShoot တစ်ဦးခန့်မှန်းထားနှင့်အတူအသုံးပြုသူကိုထောက်ပံ့ပေး, အရာတစျခုသို့မဟုတျအထူးသဖြင့်ဖြစ်ရပ်များ၏နံပါတ်နှင့် ပတ်သက်. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဘောလုံးခန့်မှန်းလည်းပါဝင်သည်, အားကစားဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်, ဒီလိုအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အကြံပြုချက်များ ( "အကြောင်းအရာ"). အသုံးပြုသူမှအကြောင်းအရာ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်လျှော့အဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် “ဝန်ဆောင်မှု”.
အဆိုပါအသုံးပြုသူသူ / သူမ၏တစ်ဦးတည်းသောအန္တရာယ်နှင့်သမ္မာသတိမှာအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြု. အဆိုပါအကြောင်းအရာအချို့အသုံးပြုမှုအသုံးပြုမှုဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောစေခြင်းငှါ, related စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ.
အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပြီးကိုဖန်တီးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, သငျသညျခံယူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ရန်အဘို့အကအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းအပျသညျဟုသူဖြစ်ရမည် , နှင့်မည်သည့်အမှု၌သငျတို့တှငျအနညျးဆုံးရပါမည် 16 အသက်မကုမ္ပဏီတခုဖြစ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity, အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာ entity. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်သင်ကခွင့်ရှိသည်အကြောင်းခိုင်လုံ, အခွင့်အာဏာနှင့်ဤသဘောတူညီချက်ထဲသို့မဝင်ရရန်နှင့်သုံးစွဲမှုသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးလိုက်နာဖို့စွမ်းရည်. SoccerBetShoot ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောနှင့်လုံးဝဆုံးဖြတ်ပါသည်အတွက်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မဆိုအလားအလာပါဝင်သူမှဝင်ရောက်ခွင့်ငြင်းဆန်ရန်. န်ထမ်း, အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, အေးဂျင့်များ, နှင့် SoccerBetShoot နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများ၏ကိုယ်စားလှယ်များက, affiliates နှင့်ခွဲများ, သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာချက်ချင်းမိသားစုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ (မိဘများအဖြစ်သတ်မှတ်, အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများ) ဒီလိုနှင့် SoccerBetShoot ၏စပွန်ဆာနှင့်တွဲဖက်နဲ့ကြော်ငြာနှင့်မြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီများကဲ့သို့တူညီသောအိမ်ထောင်စုများတွင်နေထိုင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် account တစ်ခုကိုသုံးရန်သို့မဟုတ်ဖန်တီးဖို့အရည်အချင်းမပြည့်မီ.
သငျသညျနိုငျငံ၏ဥပဒေများဘာသာရပ်များမှာ, ပြည်နယ်, မြို့ (စုပေါင်း "စီရင်ပိုင်ခွင့်") သင်ကနေထိုင်ရသောနှင့် / သို့မဟုတ်သင်ကဝဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရာမှ. ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုနေထိုင်သူများအဘို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာမကျမည်အကြောင်း, သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တင်ပြ, အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်. ဒါဟာသက်ဆိုင်သောစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်သက်ဆိုင်သောဥပဒဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် SoccerBetShoot ဆိုကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ်အာမခံလုပ်မထားဘူး, ဖော်ပြသို့မဟုတ်ဓိပ်ပာ, သင့်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သို့မဟုတ်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်န်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုများ၏ lawfulness အဖြစ်.
သင်ကအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦးတားမြစ်ထားသောစီရင်ပိုင်ခွင့်မှာတည်ရှိပါတယ်နေစဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေနှင့်သုံးစွဲမှုသည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချိုးဖောက်ပါလိမ့်မည်. အကျိုးဆက်အဖြစ်, သင့်အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့သို့မဟုတ်ရပ်စဲနိုင်.
5.အာမခံနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ Limited ၏ခွင
အသုံးပြုသူဖော်ပြသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအန္တရာယ်မှာပြုမိကြောင်းသဘောတူ. SoccerBetShoot မဟုတ်သလိုယင်း၏အရာရှိများ၏မဆိုလညျးမ, ဒါရိုက်တာများ, သို့မဟုတ်န်ထမ်း, အေးဂျင့်များ, ကုန်သည်, စပွန်ဆာ, licencors, အစိတ်အပိုင်းပေးသွင်းသူများ (ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်မျိုးလုံး), နှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်ဝယ်ယူသို့မဟုတ် Provider များကဖြန့်ဝေပေးသသူကိုမဆိုတတိယပါတီ (စုပေါင်း "Providers"), ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Providers နှင့်အတူဆက်နွယ်ကြောင်းရမ်း, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, မပြတ်မတောက်ပါလိမ့်မည်, အမှား-အခမဲ့, သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်အခမဲ့, ပိုးကောင်များ, Trojan တွေမြင်းများ, ကီးဘုတ်သစ်ခုတ်သမားများအား, စပိုင်ဝဲ, adware, malware များ, အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်, သို့မဟုတ်အခြားချို့ယွင်းချက်. သတင်းအချက်အလက်, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတိသို့မဟုတ်သတ်ပုံအမှားများကိုပါဝင်နိုင်သည်.
Bookmakers အတွက်ကစားနည်း, အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များဆိပ်ကမ်းများနှင့်လောင်းကစားခွင့်ပြုသောအခြားအဖွဲ့အစည်းများ, မူလကပင်တစ်ဦး Gamble များမှာ;
လောင်းကစားဝိုင်းက၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ / စည်းရုံးရေးမှူးများ၏အလိုတော်နှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်ရလဒ်၏အကြွင်းမဲ့အာဏာလွတ်လပ်ရေးပေးသည်, အဖြစ်တတိယပါတီများမှ;
လောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ပါဝင်မှုများ၏အန္တရာယ်မှန်းဆဖြစ်ပါသည် – သင်တန်းသားများကိုတစ်ခုဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေအဖြစ်, သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုခံရ,
အသုံးပြုသူတစ်ဦး "အကြံပေး-ခန့်မှန်းချက်" အဖြစ်အကြောင်းအရာသုံးပြီးအမြတ်အာမခံမရဖြစ်ပြီးလောင်းကစားအတွက်ပါဝင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားသောအခြေအနေမျိုးအဖြစ်ယူဆလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူ.
ထို့အပြင်, SoccerBetShoot မျှအာမခံကိုအကြောင်းအရာဘာသာရပ်ကိစ္စနှင့်တစ်ဦး "အကြံပေး-ခန့်မှန်းချက်" အဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်များအဘို့အဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှုကိုမဆိုမျိုးကိုမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး.
SoccerBetShoot အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုဒါမှမဟုတ်န်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်ရရှိသောစေခြင်းငှါရလာဒ်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမအာမခံစေသည်. အဘယ်သူမျှမပုံသေပွဲထုတ်ကုန်ပူဇော် SoccerBetShoot, သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်မြင်သောအရာကိုလူအပေါင်းတို့ကစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှုံးမဆိုများအတွက်တာဝန်ယူကြသည်မဟုတ်.
ထို့အပွငျ, SoccerBetShoot ဆိုသည့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နေရမည်မဟုတ်, အမြင်များ, အကြံဉာဏ်ကိုပါသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ထုတ်ပြန်ချက်များ (အပါအဝင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏မည်သည့်အများပြည်သူပို့စ်ဒေသများရှိ) တစ်ခုလုပ်ပိုင်ခွင့် SoccerBetShoot ကြော်ငြာရှင်များထက်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်, အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေး, အသုံးပြုသူကို, ဧည့်သည်များ, လွတ်လပ်သောစာရေးဆရာများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများက SoccerBetShoot ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအခွင့်မရှိပါ.
SoccerBetShoot အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့် related န်ဆောင်မှုမှမပြတ်မတောက်သို့မဟုတ်လုံခြုံ access ကိုအာမမခံ. ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စစ်ဆင်ရေး SoccerBetShoot ၏ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိမြောက်မြားစွာအချက်များအားဖြင့်အတူဝငျရောကျစှကျစေခြင်းငှါ. သငျသညျဖော်ပြပံ့ပိုးပေးသည့်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်မဆိုမျိုးကိုမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သဘောတူ, ဆော့ဖျဝဲ, သို့မဟုတ်မည်သည့် related န်ဆောင်မှုများ, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, တိုက်ရိုက်, သွယ်ဝိုက်, ဖွစျပှား, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်ကိုအာမခံအပေါ်အခြေခံသည်ရှိမရှိအထူးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, စာချုပ်, တရားမျှတမှုမရှိခြင်း (ပေါ့ဆမှုအပါအဝင်).
အဆိုပါအသုံးပြုသူဤဥပဒေကြောင်းအပိုဒ်ဝန်ခံ5အားလုံးအကြောင်းအရာလျှောက်ထားရမည်, ကုန်ပစ္စည်း, နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုများ. တာဝန်ယူမှု၏ထိုကဲ့သို့သောန့်အသတ်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု SoccerBetShoot ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှထတော်ခြင်းရှိမရှိလျှောက်ထားရမည်, SoccerBetShoot ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ခြင်းမှသည်, ဒါမှမဟုတ်ပြတ်တောက်ကနေ, ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း, သို့မဟုတ် SoccerBetShoot ရဲ့တချို့ကတရားစီရင်မှု၏ရပ်စဲဖွစျပှားသို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုများဖယ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ, ဒါကြောင့်အထက်ပါကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ချန်လှပ်သင်သည်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ. သင်ဝဘ်ဆိုဒ်မဆိုသောအဘို့ကိုအတူမကျေနပ်ဖြစ်ကြပါလျှင်, သင့်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောနှင့်သီးသန့်ဆေးတစ်လက်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျသင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ, သင်အားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းကိုယ်စားပြု. သငျသညျမှသဘောတူ (တစ်ဦး) စစ်မှန်တဲ့ပေး, တိကျမှု, အဆိုပါ SoccerBetShoot ရဲ့မှတ်ပုံတင်ပုံစံအားဖြင့်သတိပေးခံရအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းကိုလက်ရှိနှင့်ပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များ (က "မှတ်ပုံတင်ဒေတာများကို") နှင့် (ခ) ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ချက်ချင်းစစ်မှန်တဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဒေတာများကို update, တိကျမှု, လက်ရှိနှင့်ပြည့်စုံ. သင်ကသစ္စာကိုဖျက်ကြောင်းမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပါလျှင်, မမှန်သော, လက်ရှိသို့မဟုတ်မပြည့်စုံမရ, သို့မဟုတ် SoccerBetShoot ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်မမှန်ကန်ကြောင်းသံသယမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်, မမှန်သော, လက်ရှိသို့မဟုတ်မပြည့်စုံမရ, SoccerBetShoot သင့်အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်. သင်တို့ရှိသမျှသည်အဖိုးအခနဲ့စွဲချက်ပေးဆောင်တာဝန်ရှိသည် (သက်ဆိုင်အခွန်အပါအဝင်) သင့်ရဲ့အကောင့်အောကျဘျဆိုကျမြားနှငျ့န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်.
သငျသညျကိုရှေးခယျြခဲ့ကြသို့မဟုတ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ username နှင့် password ကိုခွဲဝေခဲ့ပြီးတာနဲ့ ("သတ်မှတ်သူများ") သင့်ရဲ့အကောင့်အတွက်, ကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့လျှို့ဝှက်သောဤသတ်မှတ်သူများစောင့်ရှောက်ဖို့သင့်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်. သင်ကသင့်ရဲ့သတ်မှတ်သူများမရှိတော့လုံလုံခြုံခြုံနဲ့လျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသောဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျခကျြခငျြးအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ SoccerBetShoot အကြောင်းကြားသင့်တယ် , အသစ်ကသတ်မှတ်သူများရွေးချယ်ခွဲဝေခြင်းနှင့်ယခင်သတ်မှတ်သူများအောက်မှာမဆိုအနာဂတ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာလက်မှတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်စေခြင်းငှါညျကြိ, SoccerBetShoot ၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်. အထက်ပါကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, မည်သည့်အရောင်းအသင့်သတ်မှတ်သူများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ရှိရာဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် လုပ်. လက်ခံခဲ့သည် (ဤနေရာတွင်ထောက်ပံ့ပေးသကဲ့သို့သင်ဟာအရင်က SoccerBetShoot အကြောင်းကြားကြပြီမဟုတ်ဘယ်မှာ) ခိုင်လုံသောအဖြစ်ကုသပါလိမ့်မည်.
တစ်ဦးတည်းသာအကောငျ့ကိုလူတစ်ဦးနှုန်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. သင့်အကောင့်လွှဲပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး. အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာသင်ကအခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုခွင့်ပြုသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုရကြလိမ့်မည်, သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်သောစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာန်ဆောင်မှုများသုံးစွဲဖို့ဥပဒေနှစ်အောက်မဆိုလူတစ်ဦး limitation မရှိဘဲအပါအဝင်, ၏နှစ်အောက်နှင့်မျှမတို့ဖြစ်ရပ်အတွက်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး 16, သင်ကနေထိုင်သူတည်ရှိသောနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြစ်ကြ၏ဘယ်မှာမဆိုစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်စံချိန်စံညွှန်းများသို့မဟုတ်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်စေခြင်းငှါထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့သတ်မှတ်သူများသုံးစွဲဖို့, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်ရှိသောနှင့် / သို့မဟုတ်နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ. ဤအပိုင်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြတွေ့ရှိမဆိုလူတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံသတင်းပို့စေခြင်းငှါ.
အဆိုပါအသုံးပြုသူစျေးနှုန်းအညီန်ဆောင်မှုများအဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည် (နှုန်းထားများ) နှင့်ငွေကြေးအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော.
သူ / သူမအကောင့်ထဲမှာသူ / သူမ၏ကို virtual ချိန်ခွင်လျှာအပေါ်အကြွေးယူနစ်အားဖြင့်, အဆိုပါ Website တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် created. က virtual ချိန်ခွင်လျှာငွေပေးချေခြင်းဖြင့်ကြိုတင်တက်ဖြည့်ရမည်ဖြစ်သည်.
ဘဏ်ကဒ်ဒါမှမဟုတ်ဝဘ်ဆိုဒ်ကလက်ခံပေးချေမှု၏အခြားနည်းလမ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေ, အတူပါသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ (လျှော့အဖြစ်ရည်ညွှန်း “အစာရှောင်ခြင်းထွက်ရန်”).
သင်တို့ရှိသမျှသည်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းအဘို့အတာဝန်ရှိသည်, SoccerBetShoot ကနေဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှု၏လက်ခံရရှိမှုနှင့်ဆက်စပ်စွဲချက်များနှင့်အခွန်, ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်လုပ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ငွေပေးချေမှုအပါအဝင်. မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်, အားလုံးအဖိုးအခနဲ့စွဲချက်၏ငွေပေးချေမှုခရက်ဒစ်များကလုပ်ရဦးမည်, ဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်တာဝန်ခံကဒ်, သင်ကတရားဝင်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ရှိသည်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်သောအချိန်တွင်ခိုင်လုံသော. ပွဲစဉ်ဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင် SoccerBetShoot ရန်ပုံငွေများပြန်လာမပူဇော်ဘူး, သင်က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာတွေ့မြင်အားလုံးကပဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ပါသည်. အားလုံးမဟုတ်မီးခြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ archive ကိုအတွက် posted ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ကိုယူ, အနိုင်ရတစ်ခုတည်းပွဲသာ, လက်မှတ်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုကို, ကြောင်းအထူးသဖြင့်တစ်ရက်အဘို့ archive ကိုအပိုင်းအတွက် posted နေကြတယ်, ဆိုကအနိုင်ဂိုးရှိလျှင်.
အားလုံးဝန်ဆောင်မှု, အားလုံးအကြောင်းအရာနှင့်ဤဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကို SoccerBetShoot ကပိုင်ဆိုင်နှင့်နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. SoccerBetShoot တတိယပါတီများကပိုင်ဆိုင်မူပိုင်ခွင့်၏ပိုင်ဆိုင်မှုတောင်းဆိုပါဘူး.
သင်ကဝဘ်ဆိုဒ်အပေါ်အသိအမှတ်ပြုအပေါင်းတို့နှင့်တကွအကြောင်းအရာနှင့်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်ကြောင်းသဘောတူ, အဆိုပါအကြောင်းအရာအပါအဝင်, ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်, ဒါပေမယ့်မူပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားမဟုတ်, အမှတ်တံဆိပ်, မူပိုင်ခွင့်, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ, ကျွမ်းကျင်မှု. များပြားအောင်လုပ်ခြင်း, ကူးယူ, ဒါမှမဟုတ်ကျဘျဆိုကျပျေါတှငျမညျသညျ့ပစ်စညျးမြားသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များ၏စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုတင်းကြပ်စွာ SoccerBetShoot တစ်ခုအမြန်စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတားမြစ်သည်. အဖြစ်ဖော်ပြ SoccerBetShoot နေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မှလွဲ., သငျသညျရောင်းဖို့မဟုတ်သဘောတူ, လိုင်စင်, ငှားရန်, modify, ဖြန့်ဝေ, မိတ္တူ, များပြားအောင်လုပ်, ပို့ပေး, လူသိရှင်ကြား display ကို, လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျ, ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာထဲကနေလက်ရာများကိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ဖန်တီး. အထက်ပါသို့ရာတွင်, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများအတွက်မဆိုပေးထားအချိန်တွင်မဆိုတစ်ခုတည်းကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤဆိုက်ကိုပေါ်တွင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာထဲကတစ်ခုမိတ္တူ print ထုတ်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်စေခြင်းငှါ, Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း, သင်တို့ရှိသမျှသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အခြားအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနဂိုအတိုင်းစောင့်ရှောက်ပေး. အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း, အဆိုပါအကြောင်းအရာအပါအဝင်, ဖော်ပြဤဝေါဟာရများအတွက်ခွင့်ပြုမရညျရှယျအဘို့တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်.
လိုင်စင် SoccerBetShoot သင်တစ်ဦးရုပ်သိမ်းခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေးအပ်, မဆိုပေးထားအချိန်တွင်မဆိုတစ်ခုတည်းကွန်ပျူတာပေါ်မှာက၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်နှင့် ဆက်စပ်. များတွင်အသုံးပြုမဆိုလိုအပ်သော software ကိုသုံးစွဲဖို့ Non-လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် Non-သီးသန့်လိုင်စင်, သငျသညျမပေး (နှင့်မဆိုတတိယပါတီခွင့်မပြုပါဘူး) မိတ္တူ, modify, တစ်ဆင်းသက်လာတဲ့ work ဖန်တီး, Windows စနစ်တွင်, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆို source code ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးပမ်း, ရောင်းချ, သတ်မှတ်, ခွဲလိုင်စင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်ဆိုညာဘကျသို့လွှဲပြောင်း. သင်သည်မည်သည့်ထုံးစံသို့မဟုတ်ပုံစံအတွက် software ကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့မသဘောတူ, သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းများကိုသုံးစွဲဖို့, အပါအဝင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရယူ၏ရည်ရွယ်ချက်.
အမည်များ; ဖုန်းနံပါတ်; အီးမေးလိပ်စာ;
ဘဏ်အကောင့်သတင်းအချက်အလက်များ; အကြွေးနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်; မွေးရက်စွဲများ; နှင့်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ.
ဝန်ဆောင်မှု update ကိုသတိပေးချက်များပေးပို့သည့်;
တိုင်းတာခြင်း, တိုးတက်အောင်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကြိုက်; နှင့်
သည်အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်း, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ဘဏ္ဍာရေး, အခွန်, ဥပဒေရေးရာ, အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာ.
ဤသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များအများအပြားလင့်များပါဝင်နိုင်သည်နှင့်အတူတူပင်အင်တာနက် browser window ကိုအတွင်းရှိအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအသုံးပြုသူများကို forward စခွေငျးငှါ. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ SoccerBetShoot များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မဟုတ်, နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဆိုက်ပေါ်တွင် link တစ်ခု၏တည်ရှိမှု SoccerBetShoot အားဖြင့်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမဆိုထောက်ခံချက်သို့မဟုတ် SoccerBetShoot နှင့်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၏ပိုင်ရှင်များအကြားမည်သည့်ဆက်နွယ်မှုဆိုလိုပါဘူး. SoccerBetShoot မျှအာမခံသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုစေသည်, လူအပေါင်းတို့တာဝန်ယူမှု disclaims, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော, အကြောင်းအရာ, သတ်မှတ်ချက်များ, ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ, ထုတ်ကုန်, န်ဆောင်မှုများ, တရားဝင်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, ရှုမွငျခ, ဟုတ်မှန်ရေး, ငွေကြေးကို, တငျ့တယျလြောကျပတျခွငျး, ဒါမှမဟုတ်နှင့်ဆက်စပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အခြားမည်သည့်ရှုထောင့်. သငျသညျ SoccerBetShoot ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမှလေးစားမှုနဲ့အတူသင်ကရန်မတာဝန်ရှိကြောင်းသဘောတူ. SoccerBetShoot ဆိုတတိယပါတီက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု. ရှေ့တော်၌ထို privacy ကိုမူဝါဒနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုမူဝါဒများအသုံးအနှုန်းများဆနျးစစျဖို့ကိုသင်အားပေး.
အသုံးပြုသူအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူကျော်လွှားသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားရမည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူ, အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုဤကျဘျဆိုကျတစျဆငျ့ကိုကမ်းလှမ်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကြားဖြတ်ဒါမှမဟုတ်ကျဘျဆိုကျ၏စစ်ဆင်ရေးကြားဖြတ်ဖို့ကြိုးစား (စုပေါင်းလျက်,a"ကိုရှောင်တိမ်းခြင်းအက်ဥပဒေ"). SoccerBetShoot စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့လျှင်, ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်, ကြောင်းအသုံးပြုသူစေ့စပ်ထားပြီး, သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုးပမ်း, မဆိုရှောင်တိမ်းခြင်းအက်ဥပဒေထဲမှာ, အလိုအလျောက်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုနှငျ့ ပတျသကျ. လိမ်လည်မှုကျူးလွန်, ထိုအခါ, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွက်, အသုံးပြုသူဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမှအသုံးပြုသူတို့၏ရဲ့လက်လှမ်း၏ရပ်ဆိုင်းမှုသို့မဟုတ်ရပ်စဲနိုင်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့် SoccerBetShoot အသုံးပြုသူဆန့်ကျင်အရပ်ဘက်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအစပြုကျင်းပခဲ့ရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များထံအသုံးပြုသူအစီရင်ခံရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
ဖြစ်စေပါတီရပ်စဲသည်အထိအသုံးပြုပါဤသတ်မှတ်ချက်များကိုထိရောက်သောများမှာ. အသုံးပြုသူက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှုပျစဲခွငျးအားဖွငျ့အခြိနျမရှေး, ဤဝေါဟာရများကိုရပ်ဆိုင်းစေခြင်းငှါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိအသုံးပြုသူအသုံးပြုမှုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုအသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်ပြဌာန်းချက်အားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုမှအသုံးပြုသူရဲ့ access ကို SoccerBetShoot ထံမှအကြောင်းကြားစာမရှိဘဲချက်ချင်းရပ်စဲစေခြင်းငှါ. မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်မည်သူမဆိုမှဝန်ဆောင်မှုငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်ယူထား.
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျဘျဆိုကျ modify သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းခွင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်ယူထား, မည်သည့်အချိန်တွင်မအသိပေးစာမပါဘဲ. အခြားမည်သည့်ကုစားကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ငါတို့သည်သင်တို့က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်လိမ်လည်လှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်ပြီသံသယရှိလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင့်ရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းစေခြင်းငှါ.
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို indemnify နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူ (သက်ဆိုင်အဖြစ်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘ, ခွဲများ, affiliates, SoccerBetShoot မိတ်ဖက်, အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, အေးဂျင့်များ, နှင့်ဝန်ထမ်း, မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်ဝယ်လိုအားအနေဖြင့်အန္တရာယ်ကင်း, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခများအပါအဝင်, ကြောင့်မဆိုတတိယပါတီဖွငျ့သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုခြင်း၏ဤသတ်မှတ်ချက်များဖောက်ဖျက်သို့မဟုတ်ပါကရည်ညွှန်းနေဖြင့်ထည့်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများထဲကပေါ်ထွက်လာသော, သို့မဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏အခွင့်အရေးကိုသင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှု.
14.သက်ဆိုင်ဥပဒေ / စီရင်ပိုင်ခွင့်
သွားရောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးခွငျးဖွငျ့, သငျသညျသဘောတူ (ဥပဒေများအခြေခံမူများ၏ပဋိပက္ခမှရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ) အောက်ပါဥပဒေများကိုသည်ဤအကြောင်းသတိပြုစရာများအုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်, သတ်မှတ်ချက်များ, ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ:
အင်္ဂလန်၏တရား – သင်ကနိုင်ငံသားသို့မဟုတ် SoccerBetShoot ၏တရားဝင်မှတ်ပုံတင်တိုင်းပြည်တစ်နေထိုင်သူမဟုတ်ပါလျှင်;
SoccerBetShoot ၏တရားဝင်မှတ်ပုံတင်တိုင်းပြည်၏တရား – သင်ကနိုင်ငံသားသို့မဟုတ် SoccerBetShoot ၏တရားဝင်မှတ်ပုံတင်တိုင်းပြည်တစ်နေထိုင်သူလျှင်;
အသုံးပြုသူဤဥပဒေဘယ်သို့နှင့်ခြွင်းချက်မရှိ SoccerBetShoot ၏တရားဝင်နေရာအပေါ်မှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူတရားရုံးများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှသဘောတူညီမှု